Itoobiya: Maxay salka ku haysaa colaadda Canfarta iyo Soomaalida? – Xeernews24
27. August 2021 /in WARAR/NEWS /von admin
Dagaal ayaa mar kale ka qarxay xad ay wadaagaan labada deegaan ee Soomaalida iyo Canfarta ee Itoobiya.
Aaga colaadda hadda ka socoto ayaa kala ah agagaarka Biyacadde oo u dhaw Magaalada Cadheyti, Tuulooyinka Shakle iyo birta dheer, oo dhanka magaalada Candhuufa ah iyo tuulada Qalacle oo aan ka fogeyn magaalada Garba-Ciise oo bil ka hor ay dagaal kula wareegeen maleeshiyaad Deegaanka Canfarta ka soo jeeda.
Ma jiraan ilaa hadda khasaare dhab ah oo ka soo baxay dagaalkaas, iyadoo horey Canfarta ay u qabsadeen labada magaalo ee Garba-Ciise iyo Cadheyti oo ka mid ah sadexda magaalo ee lagu muransanaa.
Maxamed Rooble Maxamuud, wasiir kuxigeenka xafiiska warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa BBC Somali u sheegay „in canfarta ay sabab u tahay in dagaalka uu soo noqnoqdo.“
Dhanka Canfarta kama aysan hadlin dagaalkan weli. Waa colaad ku saabsan deegaanno iyo xuduud lagu muransan yahay.
Wararka waxay intaa ku darayaan in dagaalkan uu u dhexeeyo xoolo dhaqatada Soomaalida ah iyo maleeshiyo ka soo jeedda deegaanka Canfarta. Magaalada Garba-ciise waxay saaran tahay jidka isku xira Itoobiya iyo Jabuuti.
Xukuumadda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa sheegtay in ay difaaci doonto dadka Soomaalida ah ee deggan aagga Garba-ciise iyo deegaannada ku xeeran.
Iyada oo ay taagan tahay colaadda labada deegaan oo aan xal waarana laga gaarin sheegashada dhulka la isku hayo, ayaa waxaa xaaladda sii huriyey guddiga doorashooyinka dowladda dhexe ee Itoobiya oo soo saaray go’aan ah in 8 tuulo oo xadka labada deegaan ku teedsan iney doorasha ka dhaceyn shacabka degganna ay codkooda ka dhiibtaan tuulooyinka u dhow ee ay gaari karaa.
Go’aanka guddiga doorashooyinka ayaa waxaa si weyn uga biyo-diiday maamulka dowlad deegaanka Soomaalida iyaga oo qoray warqad ay ku sheegeen iney marnaba aqbaleyn dhul uu deegaanka Soomaalida leeyahay in deegaan kale la hoos geeyo.
Deegaanka Canfarta ayaa dhankoda waxay ku doodayaan in tuulooyinka 8-da ah uu guddiga doorashooyinka go’aanka ka gaaray la hoos geeyo dhankooda doorashada soo socotana ay uga dhacdo deegaankaasi.
Guddiga doorashooyinka dowladda dhexe ee Itoobiyana go’aanka ayaa go’aanka uu gaaray ku sababeeyay in inta xal waara laga gaarayo qaddiyadda tuulooyinka ay maamullada labada deegaan isku haystaan, inuu xal u arko labada deegaanba iney halkaasi doorasha ka sameyn si looga gaashaanto isku dhac dambe oo yimaaddo.
Xukumaddii deegaanka Soomaalida ka arrimineysay uu hoggaaminayey madaxweyne Cabdi Max’uud Cumar ayaa tuulooyinka Cadhuufo, Caddeeyto iyo Garbo-ciise waxay siisay deegaanka Canfarta iyada oo loo qoray warqad rasmi ah oo dhulkaasi Canfarta lagu hoos geynayo.
Labada maamul ee Soomaalida iyo Canfarta ayaa horey u wada saxiixday heshiis, balse ma uusan fulin.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2021/08/dhuun-yar.jpg 688 480 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2021-08-27 09:46:212021-08-27 09:47:42Itoobiya: Maxay salka ku haysaa colaadda Canfarta iyo Soomaalida?
Dhacdo argagax leh oo ka dhacday garoonka Kabul iyo Warbaahinta oo hadal heysa ...